Home News Dhalinyaro Soomaali Ah oo Lagu Xiray Magalada Qaahira ee Dalka Masar
Dhalinyaro Soomaali Ah oo Lagu Xiray Magalada Qaahira ee Dalka Masar
Sida ay shegayan Warbaahinta Qaajira Ciidamada amaanka dalka Masar xalay xabsiga dhigay 17 Qof oo Soomaali ah kuwaas oo laga qab qabtay xaafadda Nasri City ee Magaalada Qaahira.
Ciidamada ayaa u dhacay Maqaayad ay Soomaalida leedahay oo ku taalla Xaafaddaasi,waxaana halkaas laga xirxiray dhallinyaro u badan Qaxooti iyo Ardey xilligaas ku sugnaa maqaayadaha.
Saraakiisha Ciidamada ee howlgalkaas fuliyay ma sheegin sababta ay u xir xireen Dadkaasi Soomaalida ah ee ku nool Magaalada Qaahir iyada oo ilaa hadda ay dadka ka dhur sugayaan jawaabta ay bixiyaan saraakiisha Ciidanka.
Dadka la qab qabtay waxaa ka mid ah wiil Soomaali Mareykan ah,Dad qaxooti sharci ah oo ku sugan Masar iyada oo sidoo kale ay ku jiraan Ardey.
Ciidamada Masar ayaa howlgal guud ka wada iyada oo dalkaasi uu dhamaadka bishan isu diyaarinayo doorashada madaxtinimada dalkaasi.
Doorashada ka dhaceysa dabayaaqada Dalka Masar waxaa la filayaa in uu ku soo boxo Madaxweynaha hadda talada haya ee C/Fataax Al sisi kaas oo dhamaan xir xiray ama dalka ka tarxiilay dadkii la tartami lahaa.